Översättning Somaliska / Waa maxay dhaqdhaqaaqa wakhtiyada firaaqada ee albaabada u furan? - Fripunkt
Fripunkt / Om fritidsklubben / Översättning Somaliska / Waa maxay dhaqdhaqaaqa wakhtiyada firaaqada ee albaabada u furan?
Waa maxay dhaqdhaqaaqa wakhtiyada firaaqada ee albaabada u furan
Waa maxay dhaqdhaqaaqa wakhtiyada firaaqada ee albaabada u furan [Öppen fritidsklubbsverksamhet]?
Waxaa noola yaqaanna naadiga klubben. Waxaanu nahay goob dhaqdhaqaaqyo ka dhacaan oo lagu kulmo oona laga helo, taasoo loogu talagalay carruurta dhigtaan sannad-dugsiyeedka 4:aad illaa 6:aad. Waxaan qabaqaabinaa dhaqdhaqaaqyo, kuwaasoo ka dhacaan goobta iyo goobo kale oo magaalada ku yaalaan. Dabcan waxay carruurta helayaan fursad ay duruustooda ku akhristaan meel degan oo ka helid leh.
Hal-abuur, orod iyo nasasho
Carruurta waxay leeyihiin baahi kala duwan, kolba maalin wax ayay xiiseeyaan. Marmar waxay u baahan yihiin in duruus-akhrisashada laga caawinno, kolkol kalena waxaa muhim u ah in wax un ay muujiyaan, taasoo noqon karto muusiik ama wax qaab leh. Goor kalena waxay jecel yihiin dhaq-dhaqaaqa. Ujdeedada naadiga waxay tahay in dhaqdhaqaayo kala duwan nalaga helo. Waxaan hab joogto ah u booqana goobaha dhaqamada iyo isboortiga, sida aan tusaale ahaan ugu qayb galno dhaqdhaqaaqa dhaqamada ama aan ciyaarno kubbadda cagta ama ciyaarta loo yaqaanno innebandy. Marmar waxaan booqana goobaha lagu dabaasho, goobaha carruurta ku ciyaaraan ama ”naadiyada” kale.
Waa maxay wakhtiyada firaaqada oo micnaha leh?
Anagu waxay noola tahay in carruurta ay ka helaan oona ka qaybgalaan dhaqdhaqaayo dareen-kicin leh ­– iyagoo fadhiya ama iyagoo dhaqdhaqaaqayo. Waxaa kaloo muhim ah in carruurta iyo dadka waawayn ba ay ku wada kulmaan deegaan amaan leh. Anagu uma dulqaadan karno falalka meelkadhacyada ku salaysan. Haddii u dhaco na durbadiiba tilaabo ayaan ka qaadna.
Carruurta saamayn ayay ku yeelan karaan
Aragtida ubadkaaga waa arrin anaga muhim noo ah. Waxaan doonaynaa in aan carruurta aan dareen-siinno in rabitaankooda u anaga muhim noo yahay. Xilli kasta waxaan carruurta siina fursad ay dhaqdhaqaaqa nalaga shaqeeyaan.
Goob-joogid iyo kharashyada
Naadiga wuxuu furan yahay wakhtiyada dhaqdhaqaaqa firaaqada, wakhtiyada carruurta ay doonayaan ay iman karaan oona noqon karaan. Laakinse waxaan doonaynaa in aan ogaanno goorta ay aqalkooda ku laabanayaan – taasoo u sabab ah in anaga, idinka iyo ubadkiina ba aan dareen-siinno amaan. Ku sugnaanshada naadiga waa lacag la’aan, laakinse haddii aad doonaysaan in ubadkiina aan siinno raashin fudud waxaad bishii bixinaysaan 150 karoon. Xaaladaas waxaa la siinayaa qado maalmaha ciidaha.
Warbixin dheeraad ma u baahan tahay?
Na soo wac ama ballan qabso sidii aan warbixin dheeraad aan idin siin lahayn awgeed! Waalidiinta markii ay doonaan ayay naadiga soo booqan karaan oo ay ka qaxwayn karaan. Warbixinta xiriirka waxaad ka heleysaa: Fritidsklubbar
Saacadaha goobta ay furan tahay
Goobta wakhtiyada firaaqada ee carruurta waxay furan tahay laga bilaabo 13.00 illaal 17.00 isniin-jimce iyo maalmaha loo yaqaanno aqoon-korsashada [studiedagar]. Ciidaha sida sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov, jullov iyo goorta u dugsiga bilaabanaayo ama dhamaanaayo ee ku abaaran ciidaha jul- iyo sommarlov waxay furan tahay laga bilaabo 10.00 illaa 17.00. Bisha luulyo way xiran tahay. Dhaqdhaqaaqa wuxuu xiran yahay ciidaha waawayn iyo midsommarafton, julafton iyo nyårsafton.
Goobta wakhtiga firaaqada waxay kaloo xaq ku leeyihiin in dhaqdhaqaaqa ay albaabbada u xiraan laba maalmood sannad-dugsiyeed kasta, taasoo u sabab ah tababarka iyo horumarka karti-xirfadeedka shaqaalaha. Maamulka dhaqdhaqaaqa kasta ay go’aan ka gaari karo goorta ay maalmahaas ku aadinayaan. Warbixin dheeraad darteed la xiriir naadiga wakhtiyada firaaqad ee ubadkaaga.
Carruurta, ardayda iyo dhallinyarada dhamaantood ee dhigta dugsiyada ama lagu xannaanadeeyo naadiyada wakhtiyada firaaqada ee degmada Västerås waxay ka caymisan yihiin shilalka. Sidaasoo kale dhaqdhaqaaqyada dugsiga xannaanadda gaar ahaanta loo maamulo iyo waxbarashada dadka waawayn shilalka way ka caymisan yihiin.
Caymisku wuxuu khuseeyaa dhammaan naadiyada wakhtiyada firaaqada ee degmada. Warbixin dheeraad ku saabsan caymiska shilalka waxaad kala xiriiri karta bogga internetka ee dowladda hoose Västerås. Isla goobtaas waxaad ka heleysaa sida dhawaaca loo wargeliyo. Warbixin dheeraad awgeed riix halkaan försäkring vid olyckor.
Waxaa kaloo ku caawini karo shaqaalaha naadiga wakhtiyada firaaqada ee ubadkaaga
Carruurta waxay guda galayaan naadiga
Mar kasta oo carruurta ay booqanayaan naadiga wakhtiyada firaaqada waa in ay "guda galaan" kombyuutarka iyagoo magaca koowaad, da’da iyo jinsiga ku qorayaan. Warbixinadaas waxaa goor dambe loo adeegsan doonaa in siyaasiyiinta iyo sarkaallada dalbada dhaqdhaqaaqa la wargeliyo. Haseyeehse magaca lama shaacbixiyo, wuxuu hab-dhiska kombyuutarka ka ciribtirma 30 maalmood kaddib.
Magaca koowaad waxaan ugu baahan nahay oo keliya kormeerid awgeed. Waxaa loo adeegsada khalad ka ilaalinta diiwanka, ama wuxuu waxtarayaa haddii qof waalid ah u khadka taleefanka nagu waydiiyo haddii ubadkooda u maalintaas naadiga ku sugna iyo in kale. Carruurta warbixin-shaqsiyeedkooda qarsoon uma baahna in ay magacooda koowaad qoran.
Hamigayga wuxuu yahay in hab fudud oo barasho ku salaysan, aan bandhigno adeegyada bulshada ee heerka sare aan qabanno. proAros wuxuu ka muuqda oo keliya kulanka adeegsadeha iyo hawlwadeneeyada, ardayga iyo macallinka, waayeelka iyo hawlwadeneeyada, da’yarka iyo xoghayeha arrimaha bulshada.
Sidaas awgeed, kulamaha waa gundhigga dhaqdhaqaaqaynna. Kulamada waa saldhigga hawlgaladaynna. Haddii kulamada tiradooda gaarayso boqolaalokun, kuwaasoo maalin kasta dhaca, ay ka buuxi lahaayeen aqoon iyo qaddirin, naxaaris iyo qaabilid xirfadeed - haa, xaaladaas waxaa suurtagal noqon karo, in aan dhaqan gelinno waxyaalaha nalaga filanaayo sida hawlkarnimo iyo tayo oo heer sare.
Haddii aan ku guulaysanno in, qof kasta, qaddar kasta, kulan kasta, kulan la yeelanshada adeegsashada kasta, qaraabada, lamaanaha wadashaqaynta iyo loo shaqeeye kasta, qof kasta u sameeyo dadaalka ugu heer sare, waxaa xaaladaas noqon lahayn ururka dalka Iswiidan ugu wanaagsan – urur waxbarashadeed casri ah.
Sidaas darteed hamigayga wuxuu yahay: Had iyo jeer kulanka ugu heer sare
Hamigayga wuu xiriir la leeyahay dhammaan kulamada ururyada, sida adeegsadeyaasha iyo dhammaan dadyoowga kale aan la kulanno. Waxay hawlwadeneeyada u suurta gelinayaan shuruudaynta taageerada hamigayga lagu gaari lahaa. Hamigayga wuxuu soo bandhiga muqaalka hawlwadeneeyada ururuka kasta u ku dadaalayo sidii adeegsadeha uu heli lahaa waxa ugu fiican. Haddii hab-dhaqankaas iyo aragtidaas ay golaha proAros leeyihiin, hogaanka iyo goobaha shaqada, waxaan xaaladaas ka talaaban doonaa ku dhaqanka maamuul ku waxyaalaha laga sameeyo urur aqoon oo casri ah.
Maadaama kulankii u yahay qodobkii mudnaanta koowaad la siiyay, xiddigta hawlgalkeenna waa aqoonta iyo tixgelinta kulamada hogaanka u ah. Anagoo aqoon kaashanayno in – carruurta barno akhrisashada, aan qof dhinaca maskaxda ka xannuunsan xannaanadeenno, taageero-siinno qof balwad adeegsado, siinno dhaqan – waxaan suurtagelinayna sare u qaadka qiimaha, adeegsade u samaynno kala duwanaansho.
Adeegyadaynna iyo kulamadaynna waxay ku dhisan yihiin xiriiryo. Adeegsadehu wuu na shuruudayn kaaraa. Tayada kulamada wadajir adeegsade u suurtagelinno. Sidaas ayuu adeegsadeha mar kasta noqonayaa ka qaybgale. Habka aan ku suurtagelinno tayada iyo qiimaha adeegsashada heerka sare ah, waxaa weeyaan in aan tusno qaddarinta wax kasta oo aan samaynno. Sida taageerada iyo jihaynta hawl-wadeneyada mar kasta u hogaansanadaan.
Hogaanka xiddigtayda waa: Aqoon iyo qaddirin
Dhaqdhaqaaqayanna maxaa hogaan u ah?
Dhammaan naadiyada waxay u hawlagalaan hab waafaqsan Xeerka dugsiyada iyo jihaynta ujeedada siyaasadeed. Waxaan mar kasta u hawlgalna sidii aan hab joogto ah isku hagaajin lahayn oona u tixraaci lahayn dhaqdhaqaaqa.
Xeerka dugsiyada muxuu dhaqdhaqaaqa ka leeyahay?
"Dhaqdhaqaaqa wakhtiyada firaaqada ee albaabada u furan waxaa loogu talagalay carruurta da’dooda u dhaxayso 10 illaa 12 sano oo u baahnayn xannaanadda iyo kor ka ilaalinta goobaha wakhtiyada firaaqada laga helo ama xannaanadda waxbarashada ku salaysan. Wuxuu kaloo noqon karaa dhamaystirka carruur-dugsiyeedka xannaanadda waxbarashada ku salaysan ah. Carruurta ma diiwangashana. Qoysaska ayaa iskaleh go’aanka goorta iyo sida carruurta uga qaybgalayaan.
Hawlgalka dhaqdhaqaaqa wakhtiyada firaaqada albaabada u furan, waxaa weeyaan dhamaystirka hawlaha dugsiyada (ha ahaato wakhti iyo waxaa ka kooban ba), in carruurta la siiyo wakhtiyada firaaqada micno leh iyo taageerada horumarkooda. Saldhigga waa in uu noqda baahida cunug kasta. Sidaas awgeed, qaabka dhaqdhaqaaq kasta waa in u ku salaysan yahay wadajirka carruurta. Waxaa kaloo muhim ah in waxyaalaha ay xiiseeyaan iwm la siiyo fiirogaar iyo tixgelin."
Warbixin dheeraad waxaad ka akhrisan kartaa shabakadda internetka ee Hay’adda dugsiyada adigoo riixa halkaan: - Skolverket allmänna råd
Hadaf-siyaasyeedka Västerås muxuu leeyahay
Markii ardayda degmada Västerås ay bilaabaan sannad-dugsiyeedka 4:aad, waxaa la siiyaa fursad ay ugu qaybgalaan dhaqdhaqaaqa wakhtiyada firaaqada ee albaabada u furan. Waa fursad la siiyoo dhammaan ardayda dhigata sannad-dugsiyeedka 4:aad illaa sannad-dugsiyeedka 6:aad. Carruurta da’dooda u dhaxayso 10–12 sano, kuwaaso badi ahaan wakhtiyada firaaqadooda ka qaata mas’uuliyad wayn. Iyagoo isla markaas dhaqdhaqaaqooda awgiis weli u baahan xiriirka dadka waawayn iyo hogaamin waxbarasho ku salaysan. Dhaqdhaqaaqa wakhtiyada firaaqada ee albaabada u furan wuxuu siinayaa u diyaargaroow ballaaran, taasoo carruurta kolba la wareegi doonaan mas’uuliyada wakhtiyada firaaqadooda. Hawlgaladaas waxay xitaa waalidiinta u leeyihiin hawl muhim ah, iyo in dhaqdhaqaaqa wakhtiyada firaaqada ee albaabada u furan waalidiinta ka qaybgalaan.
Sida lagu helo dhaqdhaqaaq oo tayo heer sare leh awgeed, wuxuu dhaqdhaqaaqa wakhtiyada firaaqada ee albaabada u furan la wadashaqayaa, tusaale ahaan ururro, goobaha wakhtiyada firaaqada, dugsiyada, kiniisadaha, goobaha wakhtiyada firaaqada kale iyo xannaanadda iyo deegaan dhow. Teeda kale, waxaa la isku dawa rida dhaqdhaqaaqa wakhtiyada firaaqada iyo kuwa la mid ah. Ujeedada waxay tahay in dhammaan carruurta ay heli karaan dhaqdhaqaayo micno leh hadba waxa ay xiiseeyaan. Dhaqdhaqaayo oo aayaha dambe sii soconayo.
Warbixin dheeraad waxaad ka akhrisan kartaa shabakadda internetka ee Hay’adda dugsiyada adigoo riixa halkaan: Västerås Stad öppen fritidsverksamhet
Baaqa carruurta ee Qaramada midoobay
Baaqa carruurta wuxuu aad ugu salaysan yahay dhaqdhaqaaqeenna, hab-dhaqankeenna, habka qaabilaadaynna iyo markii aan go’aan dhaqdhaqaaqa ka garaynno. Afarta mab’da u hawlgalkaynna ku salaysan yahay waa:
Qodobka 2:aad Xuquuqda carruurta ay ka wada siman yihiin
Qodobka 3:aad Arrrinta carruurta u habboon ama dan ugu jirto
Qodobka 6:aad Xuquuqda carruurta ay noolol iyo horumarka u leeyihiin
Qodobka 12:aad Xuquuqda carruurta tixgelinta u leeyihiin
Raashinka ubadkayga awgiis sidee idin wargeliyaa?
Wargelinta kharashka raashinka waxaa loo adeegsada foom oo aad halkaan ama naadiga wakhtiyada firaaqada arrinta khuseeyso ka heli karto.
Wargelinta raashinka ee ubadkaaga ee Naadiga wakhtiyada firaaqada waxay suurtagal noqon kartaa, haddii cunugga usan ka diiwan gashanayn goobaha wakhtiyada firaaqada. Xilliga digniinta ka saarida waa laba bilood, sidaas awgeed waa in digniinta daahid la’aan ku dhaqaaqda intii usan ubadkaaga bilaabin naadiga wakhtiyada firaaqada.
Halkaan hoos waxaad ka heleysa foomka wargelinta raashinka oo casriyeeysan. Buuxi kaddib ku soo hagaaji adreeska dhinaca hoos ee foomka ku qoran. Dabcan waxaad kaloo gacanta ka saari kartaa hawlwadenyada naadiga wakhtiyada firaaqada ee arrinta khuseeyso. Markii wargelinta la diiwan geliyo waxaa lagu soo diri doonaa warqadda lacagaha lagu bixiyo, bil kasta iyadoo lagu soo hagaajiyo adreeska aad na siisay.
Faylalka ku lifaaqan
Sidee u ciribtira kharashka raashinka ee ubadkayga?
Goorta aad doonto ayaa joojin kartaa bixinta kharashka raashinka ee ubadkaaga.
Qofka ah xilhaayeha xannaanadda/waalidka oo keliya ayaa ciribtiri karo kharashka raashinka. Isagoo adeegsada khadka taleefanka oo u waco waaxda meelaynta ee dowladda hoose 021-39 06 00. Teeda kale waxaa loo soo diri karaa e:mail skolplacering@vasteras.se Ha iloowin inaad ku soo qorta magaca, tobbanka lambar ee aqoonsiga iyo Naadiga wakhtiyada firaaqada ee ubadkaaga. Lacagbixinta waxay markaas kaddib ciribtirmaysaa hal bil kaddib.
Wixii su’aallo ah ama aad is-waydiinayso waxaad kala xiriir kartaa hawlwadeneyaasha ama madaxa naadiga wakhtiyada firaaqada arrinta khuseeyso.
Naga caawin sare u qaadka tayada hawlgalkayga!
Ma leedahay aragti xiriir la leh dhaqdhaqaaqa naadiga wakhtiyada firaaqada? Ma jirta arrin ay kula tahay in si ka duwan ama ka wanaagsan loo samayn karo? Adiga oo ah qof waalid waxaad naga caawini karta sare u qaadka tayada dhaqdhaqaaqa. Wixii fikrado iyo talo aad haysid kala xiriir naadiga wakhtiyada firaaqada!
Aragtidaada waxaad ku soo bandhigi kartaa foomka elektroonikada ee laga helo shabakadda internetka ee magaalada. Halkaan riix här sida aad halka lagugu gudbiyo awgeed. Haddii aragtida ay khuseeyso dhaqdhaqaaqa gaar ah, xaaladaas ha iloowin inaad ku soo qorto magaca Naadiga wakhtiyada firaaqada arrinta khuseeyso. Waxaan ku dadaali doonaa in hal toddobaad gudaheeda aan jawaab naga hesho.